Sicir-bararka ka jira Maamulka Puntland oo Bulshadii Saameeyay | KEYDMEDIA ONLINE
Sicir-bararka ka jira Maamulka Puntland oo Bulshadii Saameeyay
Sicir-barar xoog leh ayaa wuxuu ka jiraa deegaanada Maamulka Puntland kaasoo saameyn xooggan u geystay bulshada ku dhaqan halkaas.
PUNTLAND, Soomaaliya – Sicir-barar saameeyay dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan oo soo billowday tan iyo bartamihii sanadkan ayuu wuxuu ka jiraa deegaanada Maamulka Puntland.
Sicir bararka ayaa si iskiis ah ubillowday iyadoo maamulka Puntland uusan soo saarin wax wara oo ku saabsan sida uu ku billowday Sicir-bararkan kusii baahaya deegaanada deriska la ah dhulka ay Maamulka Puntland ka taliyi, kaasoo ay suurtagal tahay in uu kusii faafo dhammaan dhulka Soomaalida ay dagto oo dhan.
Muddo haatan laga joogo bil ayaa la qabtay lacago shilin soomaali ah oo kooxo ganacsato ah ay soo galiyeen dhulka hoos yimaada Puntland, waxaana lacagahaasi oo la qabtay ay xoogaa yara hakiyeen Sicir-bararka oo kor usii socday bilihii lasoo dhaafay, taasina waxay ahayd tallaabo ay maamulku horay u qaadeen.
Dhawaan ayey ahayd markii uu amar kasoo baxay golaha wasiirada Puntland, kaasoo wax looga baddalayay adeegga lacagaha Mobile -ka la isugu diro ee Sahal iyo eDahab ee ay leeyihiin shirkadaha isgaarsiinta Somtel iyo Golis. Shirkadaha ayaa lagu amray in laga billaabo maanta oo sabti ah ay shirkadduhu joojiyaan in aan wax hal dollar ka yar la isku diri karin.
Tallaabadan ayay Puntland ku sheegtay in ay qeyb ka tahay dadaallo loogu jiro sidii wax looga qaban lahaa Sicir-bararka ka jira deegaannada Puntland oo gaaray heerkii ugu sarreeyay abid, iyadoo weliba lacagtii shilinka Soomaaliga magaalooyinka qaarkood laga diidayo isticmaalkeeda.
Inta badan waxyaabaha Sicir-bararka ka qaata waxaa kamida dhaqan gelin la’aanta awaamiirta kasoo baxda maamulada ka jira deegaanada, waxaana dadku ay iska diidaan qaadashada Shilin Soomaaliga iyagoo u guuraya lacagaha Elektarooniga (Electronics) ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta dalka.
KEYDMEDIA ONLINE ayaa waxay u guur galeysaa heerka uu gaarsiisan yahay Sicir-bararka ka jira deegaanada Puntland oo haatan ah meesha ugu halista badan ee ay qatarta ku jiraan kumannaan qoysas dan yar ah oo dhibka ugu badan uu ku dhacayo.
Maamulka uu hoggaamiyo Siciid Deni ayaa u muuqda mid aan waxba ka qaban karin halista uu keenayo Sicir-bararka sii baahaya ee sanadkan saameynta xooggan ku reebay dhulka Puntland oo dhan.
Sicir bararka iyo kor u kaca sarifka dollarka ayaa ka jira Suuqyada Puntland, isla markaana waxaa la sheegayaa in Maanta halka Dollar uu sarifkiisu gaaray 47,000 Shilin Soomaali ah, waxaana laga yaabaa in uu kor sii aado maalmaha foodda nagu soo haya.
Saamaynta ugu ballaarani waxay taabatay dadka xoogsatada ah ee markii ay shaqeeyaan ka dib kirada u qaata shilinka Soomaaliga ah oo ugu yaraan kala bar hoos uga dhacay halkii hore, iyadoo qiimaha badeecaduhuna uu kordhay in ka badan intii hore.
Dadka reer miyiga ah oo ay noloshoodu ku xiran tahay magaalada ayaa iyagana dhibaato xoog leh waxay ka haysataa iibka waxyaabaha ay magaalada keenaan ee ay ka mid yihiin xoolaha nool iyo caanaha.